"Qalinka Ayaan Qaadanayaa Oo Berri Ayaan Heshiis Saxeexayaa Haddii......" - Willian Borges Oo Banaanka Keenay Waxa Ay Chelsea Isku Diidan Yihiin - Gool24.Net
“Qalinka Ayaan Qaadanayaa Oo Berri Ayaan Heshiis Saxeexayaa Haddii……” – Willian Borges Oo Banaanka Keenay Waxa Ay Chelsea Isku Diidan Yihiin
July 19, 2020 Apdihakem Omer Adam
Garabka weerar ee kooxda Chelsea ee Willian Borges oo sida laga warqabay dhawaanahanba heshiis cusub ay isku mari la’ yihiin kooxdiisa ayaa sheegay waxa uu isagu doonayo si uu sida ugu dhakhsaha badan qandaraas cusub qalinka ugu duugo.
Heshiiska uu kula joogay Chelsea ayaa ahaa mid dhacayay 30-kii bishii June balse la kordhiyay sababtoo ah in kubadda cagta xilli ciyaareedkeedii uu sidii hore uga dheeraaday sababta xanuunka Korona.
Kooxaha ay Chelsea ku tartamaan magaalada London ee Arsenal iyo Tottenham ayaa xiiso usoo muujiyay 31 sano jirka ree Brazil si lamid ah kooxda Maraykanka ah ee Inter Miami oo uu dhawaan David Bekcham aas-aasay.
Arrinta caqabada ku ah heshiis kordhin uu sameeyo ayaa ah mudada uu saxeexayo Willian qandaraaska, Blues ayaa doonaya inay lab sano ka saxeexdaan halka ciyaaryahanku uu saddex sano dalbanayo.
Willian oo haatan xog siiyay barta Youtube ee De Sola ayaa sheegay in uu saddex sano dalbaday isla markaana haddii qandaraas saddex sano ah la siiyo uu isla berri heshiiska cusub qalinka ku duugi doono.
“Waxa jira warar xan ah oo ku saabsan dhawr kooxood inay xiisaynayaan, wakhtigaas maan helin wax dalab ah oo xoogan, laakiin wararka xanta ahi markasta way soo baxaan” ayuu ugu horreynba yidhi Willian.
“Waan sugayaa, wakiilkaygu wax war ah ima uusan siinin ilaa hadda, waxaan sugayaa wicitaankiisa, Chelsea kaliya waxay isoo bandhigtay laba sano aniguna waxaan weydiistay saddex”
“Ujeedkayga qandaraaska xiga waa inaan saddex sano saxeexo sidaas darteed wax heshiis ah lamaan gelin Chelsea wali”